/blog/Oral turinabol/Oral turinabol ntụ ntụ: Ị maara eziokwu banyere steroid ntụ ntụ?
Ihe na 12 / 17 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Oral turinabol. O nwere 1 Comment.
1.What bụ Oral Turinabol? 2.Oral turinabol ntụ ntụ akụkọ ihe mere eme
3.What bụ Oral turinabol ntụ ntụ? 4.Gịnị bụ ihe nkịtị site na Oral turinabol ntụ ntụ?
5.How ka Oral turinabol na-arụ? 6.Benements nke Oral turinabol maka bodybuilding
7.Gịnị bụ uru nke Oral turinabol? 8.Oral turinabol na injectable turinabol na bodybuilding
9.Oral turinabol Doses na nchịkwa 10.Recommend dosage nke Oral turinabol
11.Medical dose nke Oral turinabol 12.Dosage nke Oral turinabol maka bodybuilding
13.Oral Turinabol Maka nwanyi?
Oral turinabol raw ntụ ntụ video
Oral turinabol isi agwa
aha: Oral turinabol ntụ ntụ
Molekụla Formula: C22H50
Ọbara arọ: 314.63200
Melt Point: 125 - 127 Celsius C
agba: Agba ọcha ọcha
Kedu ihe bụ Oral Turinabol?
Oral Turinabol(Chlorodehydromethyltestosterone, a makwaara dị ka 'Tbol' na Turinabol), bụ nke usoro testosterone bodybuilding(otu a ma ama testosterone enanthate ), bụ n'ezie a gbanwetụrụ ụdị Dianabol (Methandrostenolone), nke mere na ọ bụ n'ezie ngwakọta nke ihe owuwu nke Dianabol na Clostebol (4-chlorotestosterone). N'ihi ya, nke a bụ ihe kpatara aha ahụ bụ 4-chlorodehydromethyltestosterone. Mgbanwe ndị a na-agbanwe na nhazi nke ya na-eme ka ọ ghara ịbụ nke aromatazable ma nweekwa ọnụ ọgụgụ androgenic dị ala, nke nwere ike ịbụ na a kpọrọ aha Turinabol dị ka 'Dianabol Dianabol'.
Oral Turinabol (OT) yiri nkea na methandrostenolone. Nanị ihe dị iche, n'eziokwu, bụ mgbakwunye nke nchịkwa chloride na ọnọdụ C-4. Oral-turinabol nwere aha nke ịbụ ezigbo steroid. Mgbakwunye nke chloride atom na-ewepụ ikike nke aromatization site na igbochi ohere site na aromatase ma belata ntụgharị aka na DHT. Ihe dị iche iche bụ na OT nwere ike ịdị ogologo ndụ nke na - eme ka ọ dịkwuo ala ma Oral Turinabol yiri ka ọ nwere njikọ dị elu maka SHBG karịa methandrostenolone nke nwere ike ịmalite testosterone ma na-eme ka estrogen bụrụ nke a ga - emegharị.
Oral turinabol ntụ ntụ akụkọ ihe mere eme
Ọ bụ Jenapharm sitere na East Germany na 1962 wepụtara Oral Turinabol. Onye steroid ga-enwe oke nchebe dị elu ruo ọtụtụ iri afọ ọ bụghị nanị n'etiti ụmụ nwoke kamakwa na ụmụ nwanyị na ọbụna ụmụaka na ọnọdụ ọgwụgwọ. Nke a anabolic steroid (AS) gosipụtara na ọ dị oke irè n'ime mgbalị iji wuo ma ọ bụ kpuchido oke ikuku na ọkpụkpụ na-enweghị nsogbu siri ike. Otú ọ dị, Oral Turinabol ga-enweta nlebara anya zuru ụwa ọnụ na 1990 si mgbe mgbagha steroid nke East German ghọrọ ihe ọmụma ọha na eze.
Site na 1974 ruo 1989, ihe a ga-akpọ East German Doping Machine enwewo ihe ịga nke ọma n'iji ọgwụ ndị anabolic na-enye ndị egwuregwu n'egwuregwu Olympic. Ọ bụghị nanị na ha na-aghọ aghụghọ ma ha na-ahapụ ya dị ka ndị steroid dị ka Oral Turinabol bụ, n'oge ahụ, enweghị nchebe. Okwu Nchọpụta Atụmatụ nke Ọchịchị 14.25 dịka a maara ya n'ihu ọha ga-ejikwa epitestosterone n'oge a iji skew akwụkwọ testosterone na nyocha ọgwụ.
Mgbe a chọpụtara Oral Turinabol dị ka akụkụ dị mkpa nke nkwutọ East German, Jenapharm ga-akwụsị ngwaahịa ahụ na 1994. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ ọgwụ na Germany Schering, ndị na-eme ụdị steroid dịka Primobolan, Testoviron na Proviron ga-enweta Jenapharm mana ha achọghị ịkpata Oral Turinabol azụ ahịa. Kemgbe ahụ, ọ dịghị mgbe onye ezigbo ụlọ ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta anabolic steroid ugbu a ma ghọọ ezigbo steroid.
Gịnị bụ Oral turinabol ntụ ntụ?
Oral turinabol raw, the raw material of drug Oral turinabol, bụ ụdị White ka ntụ ntụ, ọtụtụ ananboloc steriods ngwaahịa soplaya na-azụta akwa dị ọcha Oral turinabol raw ntụ ntụ, mgbe ahụ, mee ka ọ n'ime Oral turinabol tablets.In ahịa, ịdị ọcha nke Oral turinabol dị iche, na-esokarị na 60% -99% ịdị ọcha, na ụgwọ dị iche.
Nkọwa nke oral turinabol ntụ ntụ dị n'okpuru:
Aha: Oral turinabol
Ụdị: White ntụ ntụ
Oge mmalite: 20 minit
Kedu ihe bụ nkịtị site na Oral turinabol ntụ ntụ?
N'ahịa, e nwere ụdị dị iche iche nke oral turinabol, dị ka Oral turinabol tablets, tablets, and Oral turinabol capsule.They all comes from Oral turinabol powder.You can easily buy some Oral turinabol tablets in shop local, ma eleghị anya, ọ bụ obere ọnụ ma ọ bụ zụrụ Oral turinabol ntụ ntụ online.Ọ ga - adị mma.
Kedu ka Oral turinabol si arụ ọrụ?
Oral Tbolworks dị ka ụdị nke Dianabol (Methandrostenolone) gbanwere; Nchikota nke Dianabol na Clostebol (4-chlorotestosterone) .Ọ bụ ezie na ọ dị ka Dianabol dịka Dianabol, ọ bụ hormone siri ike.While Tbol dị ike karịa Dianabol ọ ka na-enye ọtụtụ uru, na-enweghị mmetụta ndị metụtara steroid nke na-abawanye oestrogen.Nke a pụtara na ị nwere ike ịtụ anya ịhụ otu ebe, ọ bụrụ na ọ bụghị nnukwu ahụ ike, na-enweghị nsogbu ọ bụla, njigide mmiri ma ọ bụ gynecomastia.
Na arụ ọrụ, àgwà nke Oral Turinabol dị nnọọ mfe. Dị ka ọtụtụ anabolic steroid o kwesịrị inwe mmetụta dị mma na njikọ protein na njigide nitrogen, nakwa dịka ọnụọgụ ọbara ọbara ọbara. Àgwà ndị a dị mkpa dịka ha na-eme ka ọnọdụ onye ọ bụla dịkwuo elu. Njikọ protein na protein ahụ bụ isi nkwụsị ụlọ nke ahụ ike na njikọ nke na-anọchite anya ọnụego nke mkpụrụ ndụ na-arụpụta protein, na njigide nitrogen na-anọchite anya akụkụ dị mkpa nke ụrọ anụ ahụ.
Enweghị ike na nitrogen ga-eduba na steeti catabolic, ebe dị ka ego dị elu ga-akwalite ọnọdụ ikuku na-adọrọ adọrọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ọbara ọbara uhie, bụ ndị na-ebu ibu maka ikuku oxygen na ọbara. Mkpụrụ ndụ ọbara uhie ndị ọzọ ga-ejikọta ka ikuku oxygenation ka ukwuu, nke ga-esi na ya gbanyekwuo ntachi obi. Ihe ndị a niile ga-aba uru dị ukwuu na ikike ahụ mmadụ nwere ike ịnaghachi.
Uru nke Oral turinabol maka bodybuilding
Kedu uru nke Oral turinabol for bodybuilding? Let's see it.
Nsonaazụ na-enweghị uru bara uru (nke a bara uru na egwuregwu ebe ị na-agbalị ime ka ibu ma ọ bụ mpi na klas ụfọdụ)
Mkpụrụ obi dị ọkụ na-enweghị anyaụfụ
Mee ka ikpo okwu ahụ dịkwuo elu
Ikike ike agbanye aka na SHBG
Mụbaa na free testosterone
Mmetụta Na-adịghị Ala
Onye na-eme egwuregwu a bara uru nye ndị na-eme egwuregwu dị ka ọ na-eduga n'ịba ụba na nkwonkwo akwara, na-enweghị nkwụsị mmiri ọ bụla, ma ọ bụ na enweghi ịrị elu nke estrogen.
Ọ bụ ezie na uru ahụ na-aba uru nke Oral turinabol bụ ihe na-erughị ndị ọzọ anabolic steroid dị ka Dianabol, ị ga-ahụkarị steroid a na-eji "stacks" site bodybuilders.
Ihe kpatara nke a bụ na ọ nwere ike inye aka iwelie nnwere onwe (aka ọrụ) testosterone eto eto ekele ya na-eme ihe gbasara agụụ mmekọahụ nke ejiri globulin (SHBG). Nke a na-enyere aka mee ka uru ndị ọzọ steroid jiri.
Kedu uru nke Oral turinabol?
N'ihi ụda nke turinabol nke dị iche iche nke androgenic ya na mmetụta anabolic, ọ bụ ụbụrụ anabolic na-adịghị ike karịa nne na nna ya bụ Dianabol. Otú ọ dị, mmesi obi ike na Tbol bụ na site n'ikike ọ bụla nwere ike imepụta ahụ, ọ ga-eme ka ọ dịkwuo ala n'ụzọ mmetụta nke androgenic na enweghi mmetụta nke estrogenic (n'ihi na enweghi ike ịkụnye n'ime Estrogen). N'ihi ike ya nke na-adịghị ike karịa Dianabol, a na-ewere doses chọrọ iji nweta mmetụta site na Tbol dị oke elu (a ga-akọwa nke a n'oge na-adịghị anya na ngalaba Tbol doses nke profaịlụ a).
N'ikpeazụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-atụ anya na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha enweghi ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Enweghi ike ịchọta oke ike na ike na-enweghị ihe ọhụụ n'ihi enweghị ike anabolic, mana ọ ga-atụ anya na ọ ga-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ọ dị mma. A na-ejikwa ya dịka ezigbo onye na-egbu egbu n'oge oge oke ntụsara ahụ ma ọ bụ tupu ịkwado nkwadebe maka enweghị ike ịbanye na Estrogen. Okwute nke turinabol nke oral na-enwu gbaa dika ndi ozo ndi ozo nke anabolic mgbe o na agba ya na ndi ozo nke anabolic site na ike nke ya na SHBG. Icheta na SHBG na - enye ohere ka ndị ọzọ na - arịa ọrịa anabolic ndị ọzọ a na - egbochi ya iji nwee ike ịrụ ọrụ ha, ebe SHBG na - egbochighị ya, nke bụ uru ọzọ ọ na - egosi.
Oral turinabol na injectable turinabol na bodybuilding
Ọdịiche dị n'etiti onu na injectable turinabol dị ka ọtụtụ ndị ọzọ steroid. Oral dị mfe iji ma na nkwupụta na ọ nwere ike imebi imeju, ya mere onye nwere ike ịkwado usoro dị elu nke injectable version. Ọzọkwa, a na-achọpụta ngwa ngwa ọzọ. Ma, n'ozuzu, nke a bụ ihe gbasara mmasị onwe onye.
In bodybuilding a pụrụ ịkpọ turinabol a rookie. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya - n'oge gara aga "eze ọgwụ na-eme ihe" na Eastern Europe na-adịtụ ala methandrostenolone (dianabol). A na-ejide ndị na-azụ egwuregwu na-agba chaa chaa site na Eastern Germany. Western Europe na USA ọbụna amaghị na ngwaahịa dị otú a, ọ dịkarịa ala ọ dịghị ndị na-ahụ maka ozu na-akọ na ha ejiri ya mee ihe. Ọnọdụ gbanwere ọ bụghị n'oge ahụ gara aga mgbe e nyere ọgwụ ọjọọ a bara uru nke abụọ wee nwee ọganihu dị egwu n'ahịa US na obere oge na nke ahụ na mba ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara ihe ịga nke ọma a? Na mbụ turinabol na-ebuli ike. Nke abuo, dị ka ekwuru, oral turinabol ngwa ngwa na-ahapụ ahụ ya ma ghara ịchọta n'ime urine ahụ n'ime 6-8 ụbọchị mgbe njedebe nke ojiji. Anyị anụbeghị banyere nyocha ọ bụla nke doping maka turinabol. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ọ bụghị nanị n'oge a ka a na-eme ule ndị dị otú ahụ.
A nwere ike ịlele akụkụ dị mma nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe dị ka inye ike na-eme ka ahụ ike ghara inwe nnukwu mmiri. Ahụmahụ na-egosi na iji turinabol bụ ihe fọrọ nke nta ka amanyere iwu na ịkwado mmemme nkwakọba. Ọ na-ejikwa ọrụ nke nchebe nke oke ahụ ike megide mbibi mgbe ọ na-emegharị oge.
E nwere ihe ọzọ mma nke turinabol - ọ bụ «mmekọahụ ọgwụ». Onye na-arịa ọrịa ọgwụ a na-eme ngwa ngwa na-amụbawanye na libido maka ụmụ nwoke, mgbe ụfọdụ ka ọchịchọ nke inwe mmekọahụ na-emeri ọchịchọ maka ọzụzụ. cycles nke "arọ" AAS iji nọgide na-enwe mmekọahụ-ụgbọala.
Oral turinabol Doses na nchịkwa
Oral turinabol nwere ọnụ ala androgenic dị ala nke 6 na njirimara ike anabolic nke 53, nke a na-eme ka ọ dị nso zuru oke ma ọ bụrụ na atụnyere mmetụta na uru. N'ihi ndị dị ka ọnụ ala androgenic dị ala, ihe otutu, mmegide, oke iwe na ume na-abawanye ụkọ, mana ọ bụghị nke dị adị. E jiri ya tụnyere nne na nna ya Dianabol, ọ bụ ike na anabolic na bodybuilders adịghị ahụ Oral Tbol dị ka uka inweta gị n'ụlọnga.
Nyocha onyonyo nke Oral turinabol
Oral turinabol nwere ihe dị ka ọkara nke anabolic rating nke Testosterone, ya mere, ihe a na-ekwukarị na oral turinabol dị na 20-40mg kwa ụbọchị. Ọkpụkpụ turinaboldosages nwere ike ịgafe 40-80mg kwa ụbọchị, ma ndị ozubuilders na-akọ mmetụta dị iche iche na-amalite ịrị elu, ebe ọ bụ na enweta ihe na-adịgide adịgide.
Usoro ọgwụgwọ nke Oral turinabol
Usoro ọgwụgwọ nke Oral turinabol dị gburugburu 5-10mg kwa ụbọchị ma nye ndị nwere ọrịa na-egbute ahụ ike. Usoro ọgwụgwọ ụmụ nwanyị na-amalite na 1mg kwa ụbọchị ma nwee ike ịgafe 2.5mg kwa ụbọchị (QC).
Ọgwụ nke Oral turinabol maka bodybuilding
A na-atụ aro Oral turinabol doses na 20-40mg kwa ụbọchị.
Ndị ọrụ nke etiti nwere ike iji 40-60mg kwa ụbọchị.
Ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nwere ike iji 80mg kwa ụbọchị, ọ ga-akara gị mma karịa 80mg / ụbọchị, Otú ọ dị, usoro ndị a dị oke njọ nwere ike ịkpata mmetụta ndị siri ike na ndị ọzọ androgens nwere ike iji ya mee ihe.
Oral Turinabol N'ihi na nwanyi?
Ndị inyom na-eme egwuregwu na East Germany na-ewere OT na 5-15 mg kwa ụbọchị maka izu abụọ ma ọ bụ isii n'otu oge. E wezụga ịbụ ndị na-amaghị nwoke, ọtụtụ n'ime ndị inyom a na-eme egwuregwu na-arịakwa ọrịa, ọrịa obi, amaghị ọmụmụ, nsogbu uche, na ọbụna ọnwụ. Oral Turinabol egosiri na ọ gaghị abụ onye na-arịa ọrịa anabolic steroid maka ụmụ nwanyị. Anaghị m ekwupụta na ọ ga - esi na ya pụta, mana ọ bụ eziokwu doro anya na ọnụego nke ọnụọgụ ndị dị otú ahụ dị ezigbo mkpa. N'ezie, anyị adịghị akwado nwanyị ka o jiri ọgwụ a.
Turinabol Cycles na-eji (maka amaokwu naanị)
Oral Turinabol okirikiri
Ọkpụkpụ turinabol na-agba ọgwụ
Ekwesiri ighota na ogaghi ekwe omume ichoputa usoro onu ogugu nke oma n'enweghi ihe omuma banyere ihe omuma nke onye n'egwuregwu, ihe omumu ya maka iji anabolic androgenic steroid, ihe mgbaru ihe ya na ihe ndi ozo.
Ịkwado ụda turinabol
Ọ dị mma maka ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme ihe ike ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ n'ahụ na-egbutu osisi. Ma ọ bụrụ na nnukwu abụba dị mkpa, ọ gaghị enyere aka n'ihi na ọ bụ onye steroid, ọ bụghị onye na-esi ísì ụtọ.
1) Turanabol 35 mg / ED maka izu atọ na njedebe nke deca-dianabol-testosterone iji mee ka enyemaka
2) Turanabol 50 mg / ED maka izu 6 na Parabolan (200 mg / w) na / ma ọ bụ Stanozolol (150 mg / w) na njedebe nke okirikiri maka izu 2-3 (ikekwe site ná mmalite nke okirikiri)
3) Turanabol standalone okirikiri 50 mg / ED maka izu 6. Mbadamba ụda / nchịkọta mpi.
4) N'oge nkwadebe akwado turinabol na-ejikọta ya na trenbolone, oxandrolone ma ọ bụ stanozolol. A na - enweta ihe dị mma site na njikọta na testosterone propionate.
5) Nchikota nke turinabol + oxandrolone adịghị ike, ọ nwere ike kwadoro naanị maka ụmụ nwanyị.
6) Ị nwere ike iji oral na injectable turinabol n'oge uka-inweta okirikiri dị iche iche njikọta, dịka ọmụmaatụ na testosterone, nandrolone ma ọ bụ nchikota ya, kama methandrostenolone (dianabol). A na-atụ aro maka ndị na-egwu egwuregwu na-achọ inwe ahụ ike.
PCT dị mkpa mgbe ọtụtụ n'ime ọmụmụ ihe ndị a.
Oral turinabol ọkara ndụ
Ọkara ndụ nke Oral turinabol na nkà mmụta sayensị akwụkwọ mgbe Njikwa IV bụ 16 awa; Otú o sina dị, ọkpụkpụ turinabol nke ụbụrụ abụghị otu. Otutu ọkara ndụ maka nchịkwa ọnụ bụ ogologo oge karịa nke nchịkwa nke anọ, Otú ọ dị, na nke a, ọ nwere ike ịbụ mkpụmkpụ n'ihi mbido metabolism mbụ ma belata ọkwa plasma elu ma e jiri ya tụnyere ụdị IV. Akwụkwọ ọzọ na-atụ aro obere ndụ dị mkpirikpi. Ezi atụmatụ dị ma ọ dịkarịa ala awa asatọ maka ọkara ndụ nke steroid a ma eleghị anya ọ bụ ezigbo ihe dị n'etiti 12 na 20 awa. Eziokwu ahụ bụ na a pụrụ ịchọpụta metabolites nke steroid a ruo ogologo oge mgbe njedebe na-arụ ụka maka ogologo ndụ.
Mmetụta akụkụ nke Oral turinabol
A maara Turinabol dịka otu n'ime ndị dị nwayọọ anabolic steroid, ọ na-etinyekarị n'otu ụdị ahụ Anavar na Primobolan.Isoro steroid a agaghị emetụta afọ gị nke estrogen, ya bụ otu n'ime safest steroid maka ụmụ nwanyị iji.
Ọ bụ ezie na nchekwa karịa ọtụtụ steroid, na-eji Oral turinabol enweghị ihe ize ndụ. Nke a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị nwere ike ịnweta nke Oral turinabol ị nwere ike izute:
Mgbochi nke mmepụta nke testosterone
LDL (ọjọọ) cholesterol
Nbelata cholesterol HDL (ezigbo)
Nsogbu ọmụmụ / Lower sperm count
Inwekwu nchegbu na imeju
Ike ntutu isi nwere ike ime
Ịba ụba nke ntutu ahụ
Naanị n'ihi na onye na-ahụ maka steroid nwere ike ịkpata mmetụta ndị ọ pụtaghị apụta na ị ga-enweta ha. Anyị nile na-emeghachi ọgwụ na ọgwụ dịgasị iche iche.
Ntuchi nke Natural Testosterone
Dị ka ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa anabolic, ha nwere ike iduga ahụ gị nke na-emepụta obere testosterone. Mgbe ụfọdụ, ọkwa gị ga-alaghachi nkịtị mgbe ọkpụkpụ steroid gachara, mana nke a abụghị mgbe niile.
Ọkụ nke obere testosterone nwere ike iduga n'ọtụtụ okwu gụnyere mmụba na abụba ahụ na obere obere ahụ. I nwekwara ike izute nsogbu mmekọahụ, dịka obere libido na mmepụta mkpụrụ nke obere.
Mmetụta na Cholesterol gị
Iji oral turinabol nwere ike ime ka mmụba na LDL cholesterol na obere HDL cholesterol. Nke a nwere ike iweli ọnụ ọgụgụ nke ihe edere edere n'ime akwara gị, nke nwere ike ibute nsogbu ndị dị ka mmetụ obi na ọrịa strok.
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ ugbu a site na ọkwa cholesterol dị elu ọ na-akwadoghị iji steroid anabolic.
Ị nwere ike belata ihe ize ndụ site na iji usoro ndị a:
Na-eri nri ndị ọzọ abụba (omega-3 fatty acids)
Tụkwasị na mmanụ azụ
Debe nri gị nke abụba jupụtara
Belata ihe oriri shuga
Mee ka cardio buru ibu
Nyochaa cholesterol gị
Emela ka ọ gbakwunye na steroid ndị ọzọ
Ọdịmpe Kawanye nke Mmebi Mebiri
Ọtụtụ steroid ndị anabolic bụ hepatotoxic, na Oral turinabol adịghị iche. Iji ya mee ihe nwere ike ime ka ụbụrụ nchekasị gị dịkwuo elu. Nke a apụtaghị na ị ga-emebi imeju gị site n'iji ya mee ihe, ma ọ bụrụ na ịnweghị ume ime mmụọ ka ịmalite mgbe ahụ, a ga-ezere steroid a nke ọma izere. na-aṅụbiga mmanya ókè ókè, na iji jide n'aka na usoro ịgba ọsọ gị agaghị agafe oge akwadoro.
Ịzụta ụra turinabol
ebe ịzụta Oral turinabol ntụ ntụ?ị bụ ezigbo ihe ịchọrọ iji chee echiche banyere ya .Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta Turinabol ntụ ntụ, ị na-abanye n'ahịa nke dị iche. Ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ozugbo na ụlọ ahịa ọgwụ na mpaghara, ma nwee ike ịnye iwu n'usoro ụlọ akwụkwọ Turinabol, dị ka ụlọ ahịa ụlọ ahịa, dị ka ụlọ ahịa nke ụlọ ahịa, ọnụọgụ ego nke Turinabol ngwongwo dị ntanetị bụ ngwa ngwa ma dị mfe, nhọrọ dị ike karị, ma ị bụ ụlọ nwere ezigbo nkwado nke ndị na-azụ ahịa, ma ọ bụrụ na ịnweworị ndị na-ebu ibu a pụrụ ịdabere na ya, ya mere ịkele gị, ọ bụrụ na ọ bụghị, AAS bụ ikekwe ịhọrọ.
Esi mee ka levitra dị irè karị	Nwa Viagra? Ihe nile banyere Mmekọahụ Mmebi Flibanserin ntụ ntụ